Non Nokwelukiweyo Bag
Non Nokwelukiweyo D-Sika Bag
Non Nokwelukiweyo T-Shirt Bag
Isikhwama Sama-Tote Esilukiwe
Laminated Non Nokwelukiweyo Tote Bag
Laser laminated Non Nokwelukiweyo Bag
Non Nokwelukiweyo Drawstring Bag
Ultrasonic Non Nokwelukiweyo Tote
Ukotini Wendwangu Yesikhwama
Ukotini Wendwangu Yesikhwama ene-Bottom Gusset
Ukotini we-Canvas Drawstring Bag
Ukotini we-Canvas Mesh Bag
Ukotini Canvas Tote nge Gusset
Ukotini Canvas Zipper Bag
Isikhwama Esimhlophe Sokotini Wendwangu
Isikhwama se-Velcro Thermal
Uziphu Thermal Bag
Isikhwama Sokuthenga Esigoqekayo
Iyini imiphumela yezikhwama zokuvikela imvelo ezingalukanga kwimpahla yebhizinisi?
Isikhathi Iposi: Apr-28-2021
Iyini imiphumela yezikhwama zokuvikela imvelo ezingalukanga kwimpahla yebhizinisi? Non nokwelukiweyo isikhwama Ukuvikelwa kwemvelo uhlobo isikhwama emaphaketheni ezenziwe ngendwangu non-ephothwe. Luhlobo lokucaciswa kwefomu langaphandle nokuqiniswa kwesithombe sonke somkhiqizo. Kungumusa o ...Funda kabanzi »
Indlela ukuhlukanisa ukushuba kwesikhwama okwenza indwangu okungezona nokwelukiweyo?
Isikhathi Iposi: Apr-27-2021
Indlela ukuhlukanisa ukushuba kwesikhwama okwenza indwangu okungezona nokwelukiweyo? Ekukhiqizweni kwezindwangu ezingalukiwe, kwesinye isikhathi ubukhulu bezindwangu ezingalukiwe abalingani. Kwenzenjani? Okulandelayo ukuthi ukhulume ngezimbangela ezingaba khona zobukhulu obungalingani bezindwangu ezingalukiwe ngaphansi kwe ...Funda kabanzi »
Izici ezizocatshangelwa ekubalweni kwentengo kwesikhwama esingeluki
Isikhathi Iposi: Apr-26-2021
Izici ezizocatshangelwa ekubalweni kwentengo kwesikhwama esingeluki Yiziphi izinto okufanele zicatshangelwe ekubalweni kwentengo kwezikhwama ezingalukiwe? Manje kunezikhwama eziningi ezingalukiwe ezenziwe ngezifiso. Abakhiqizi nezitolo eziningi badinga ukwenza ngezifiso izikhwama ezingezona ezelukiwe, noma ukuthuthukisa umkhiqizo wabo ...Funda kabanzi »
Ama-Factors athinta intengo yezikhwama ezingalukiwe
Isikhathi Iposi: Apr-25-2021
Ama-Factors athinta intengo yezikhwama ezingalukiwe Isikhathi sokudalwa kweposi: Novemba 02, 2011 13:36 imibono: 1 phequlula: Iminikelo eyi-165 EChina yanamuhla, ngokujula komqondo wekhabhoni ephansi, isidingo sezikhwama zokuvikela imvelo siyanda. Ukuze uthathe isabelo semakethe, indoda ...Funda kabanzi »
Isibalo sezikhwama ezingalukiwe sincane, okwandisa izindleko!
Isikhathi Iposi: Apr-24-2021
Isibalo sezikhwama ezingalukiwe sincane, okwandisa izindleko! Kulezi zinsuku, ukwenza ngokwezifiso umkhiqizo sekuyindlela ejwayelekile kuzo zonke izigaba zempilo. Izikhwama ezingezona ezelukiwe zifakiwe. Kodwa-ke, kwabafuna izinto, ukwenza ngokwezifiso kunezinzuzo nezinkinga zombili. Kungani usho njalo? I-Zhdbag, njenge-pr ...Funda kabanzi »
Kungani intengo yeyunithi yezikhwama ezincane ezingezona ezilukiwe iphakeme?
Isikhathi Iposi: Apr-23-2021
Kungani intengo yeyunithi yezikhwama ezincane ezingezona ezilukiwe iphakeme? Amakhasimende amaningi ayamangala ukuthola ukuthi ikhotheshini yethu iphakeme kakhulu kunentengo yeyunithi yezikhwama ezingama-5000 ezingezona ezelukiwe lapho ngi-oda izikhwama eziyi-1000 ezingezona ezelukiwe? Kunomehluko omkhulu ngentengo yeyunithi yamashumi amasaka ezinkulungwane, ngakho-ke sicabanga ukuthi ...Funda kabanzi »
Ungayibona kanjani ikhwalithi yendwangu yesikhwama sokuvikela imvelo esingalukanga?
Isikhathi Iposi: Apr-22-2021
Ungayibona kanjani ikhwalithi yendwangu yesikhwama sokuvikela imvelo esingalukanga? Indlela ukukhomba Indwangu nonwoven? Okokuqala, kudingeka sazi ukuthi okokusebenza kwesikhwama esingelukiwe ngokwemvelo akulukiwe, okwaziwa nangokuthi akuluki. Kepha ngokuvamile sikubiza ngokuthi akuluki. Emakethe yanamuhla engalukiwe, ...Funda kabanzi »
Uyini umehluko phakathi kwesikhwama esingalukiwe nesikhwama sephepha?
Isikhathi Iposi: Apr-21-2021
Uyini umehluko phakathi kwesikhwama esingalukiwe nesikhwama sephepha? Sivame ukubona izinhlobo ezimbili zezikhwama, eyodwa iyindwangu engalukanga; Elinye iphepha. Izindwangu ezingalukiwe zingahlukaniswa zibe izikhwama ezingezona ezelukiwe, izikhwama ezingezona ezelukiwe, izikhwama zokuthenga ezingezona ezelukiwe, njll.Funda kabanzi »
Yikuphi okungcono kunesikhwama sokuthenga esingelukiwe nempahla yesikhwama sephepha?
Isikhathi Iposi: Apr-20-2021
Yikuphi okungcono kunesikhwama sokuthenga esingelukiwe nempahla yesikhwama sephepha? 1, The reusability of non-ephothwe yezitolo izikhwama. Ubuhle besikhwama sokuthenga esingalukiwe ukuthi singasetshenziswa kaningi. Isikhwama sephepha singasetshenziswa kuphela, futhi intengo yefektri iphakeme kunaleyo yezitolo ezingalukiwe b ...Funda kabanzi »
Ungawaphrinta kanjani amagama ezikhwameni ezingavukiwe?
Isikhathi Iposi: Apr-19-2021
Ungawaphrinta kanjani amagama kuzikhwama ezingalukiwe？ Manje amakhasimende amaningi enza ngezifiso izikhwama ezingezona ezelukiwe ngokuphrinta inkampani noma ilogo yenkampani nombhalo. I-logo ingaphrintwa ezikhwameni ezingalukwanga ngalezi zindlela ezilandelayo:Funda kabanzi »
Ungayithuthukisa kanjani impilo yesikhwama esingenalukiwe?
Isikhathi Iposi: Ephreli-18-2021
Ungayithuthukisa kanjani impilo yesikhwama esingenalukiwe? Kulezi zinsuku, kulo mphakathi ongenakho ukungcola, izikhwama zokuthenga ezingalukiwe zithandwa esikhundleni sezikhwama zepulasitiki ezingcolisa imvelo. Kodwa-ke, lolu hlobo lwezikhwama luhluke kakhulu kwezinye izikhwama zokuthenga ezithengiswa emakethe, Ngokuvamile, uma ngabe ...Funda kabanzi »
Luhlobo luni lobuchwepheshe isikhwama esingelukiwe esisetshenziselwa ijezi le-cashmere?
Isikhathi Iposi: Apr-17-2021
Luhlobo luni lobuchwepheshe isikhwama esingelukiwe esisetshenziselwa ijezi le-cashmere? Isikhwama sendwangu esingeluki ngokuvamile sisetshenziselwa ukubamba ijezi le-cashmere. Olunye uhlangothi luyindwangu engalukiwe, olunye uhlangothi luyi-PVC noma zonke ziyizinto zendwangu ezingalukiwe Kukhona nohlobo lwesikhwama sejazi le-cashmere, okuwufuzo ...Funda kabanzi »
123456 Okulandelayo> >> Ikhasi 1/8
I-Chengdu zhihongda nonwoven bag Co., Ltd.
Ucingo: 0086 15184479681
UWhatsapp: 0086 15184479681